[Chess] Topalov vs Kramnik - Elista 2006 | Diam-penina
ity misy video fa misy mandoa vola
Nampidirin'i voromailala — 28 Sep 2006, 23:58
Efa nahita an'io video io nga i voromailala ?
Nampidirin'i fraz — 29 Sep 2006, 00:01
efa nomeko nareo raha efa nahita za :-)
Nampidirin'i voromailala — 02 Okt 2006, 02:14
Nanaiky ny hanohy ny lalao moa ny roa tonta na dia forfait aza i Kramnik tamin'ny lalao fahadimy. Ny faha-enina dia ady sahala. Ny lalao fahafito dia mbola eo an-dalana izao manoratra izao. Niampanga indray moa ny mpanazatra an'i Topalov rehefa avy nandinika ireo partie efa vita fa hoe nampiasa Fritz9 hono i Kramnik tamin'ireo lalao teo aloha....
Ady saritaka be !!
Nampidirin'i fraz — 04 Okt 2006, 00:45
5.5-5.5 , partie iray sisa ... :)
Nampidirin'i lapino — 11 Okt 2006, 23:45
Efa vita ilay partie faha-12. Ady sahala indray , ny score izao 6-6 dia mbola misy départage indray fa lasa jeu rapide no hanaovana azy angamba izao.
Nampidirin'i fraz — 12 Okt 2006, 00:29
Kramnik hono izany no tompondaka e! :)
Nandresy in-2 sy nul 1 tamin'ny lalao rapida 4 lery
Nampidirin'i lapino — 13 Okt 2006, 01:30
Raha ny fahitako ny filalao aloha dia i Kramnik no hitako tokony handresy dia arahabaina moa izy izany.
Sady izy ihany no nandresy an'i Kasparov hatramin'izay.
Nampidirin'i fraz — 13 Okt 2006, 02:05